ဗေဒင် Archives - Uptodate MM
(၂၄. ၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့ မှာ တရော် က င်ပွန်း နဲ့ ခေါ င်းလျှော် ဖို့ မေ မ့ ပါ နဲ့ နော်
ဘုန်းကျက်သရေ လာဘ်ပွင့်် ဦးခေါင်းမင်္ဂလာ ပြုရေ အာင် အားလုံးမင်္ဂလာပါအနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ချစ်ခင်လေးစာကြသောမိသားစုဆွေ မျိုး မိတ်သင်္ဂဟအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ မနှစ်ကတကြိမ်ရေးသားထားသလို မြန်မာနှစ်ရဲ့ပထမလ ဖြစ်တဲ့တန်းခူးလဆန်း၁ရက်နေ့မှာ ဦးခေါင်း ဆေးမင်္ဂလာပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ရှေးဆို ရိုးစကားလေးနဲ့အညီ ဆန်းရက်၁ရက်မှာ ဦးခေါင်ဆေးရင် ဘုန်းကျက်သရေမဂ်လာ တိုးပွားပြီ လာဘ်ပွင့်ခြင်း ကံကောင်းခြင်းမင်္ဂ လာအဖြာဖြာတွေတိုးပွားကြခြင်းအန္တရာယ် ကင်းခြင်းဆိုသည့်အတိုင်းယခု တန်ခူးလဆန်း၁ရက်နေ့ ၂၄.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့ပဲဖြစ် ပါတယ် အဲ့ဒီနေ့မှာ
တစ် ပတ် စာ အတွက် မနောမ ယေ ဟာ စာ တမ်း
မတ် လ ၁၈ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် …Credit : မနောမရဂျာနယ်…မတျလ ၁၈ ရကျနမှေ့ မတျလ ၂၄ ရကျနအေ့ထိ ကံ ဉာဏျ ဝီရိယ သုံးခကျြလုံးအားကောငျးအောငျ ကွိုးပမျးတျောမူနိုငျကွပါစသေျော …Credit : မနောမရ
တစ် ပတ် စာ ကံ ကြမ္မာ ဟော စာ တမ်း (၁၇.၃.၂၀၂၀ မှ ၂၃.၃.၂ ၀၂၀ အ ထိ)
တ နင်္ဂနွေ” ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အစစအ ရာရာသတိကြိးစွာထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ရန်ပတ်လည်ဝိုင်းနေတတ်ပါသည်။ ပြဿနာအကြီး တစ်ခုဖြေရှင်းရတတ်သည်။ ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်လည်း သူတပါးကိစ္စဝင်ပါရတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးနှင်ပတ်လို့ ဆီး၊မျက်စိ၊နား၊နှာခေါင်း၊ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ ခရီးကံတော့ အလွန်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ရပ်ဝေးကလည်း အကူညီကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မည်။ အိမ်ကိစ္စ၊ အဖိုးတန်ပစ္စည်းအရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေ အောင်မြင်မည်။ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း၊ အုတ် သွပ် သံသစ်လုပ်ငန်းတွေ အထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေလည်း အကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ မြေ၊အမွေ၊ပညာရေးကိစ္စများကတော့ ဆုံဖြတ်ရခက်နေတတ်သည်။
မ ဟာသင်္ကြန် ကျချိန် – ၁၃၈၁ ခု ၊နှောင်းတန်းခူလပြည့်ကျော်(၆)ရက် ၊၂၀၂၀ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၁၃)ရက် တနင်္လာနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညစက်(၁၁)နာရီ၊(၃၄) မိနစ်၊(၁၈)စက္ကန့်။မဟာသင်္ကြန်အကြတ်မနေ့ – ၁၃၈၁ ခု၊နောင်းတခူးလပြည့်ကျော် (၇) ရက်၊၂၀၂၀ ခုနစ်၊ဧပြီလ(၁၄)ရက်၊အင်္ဂါ နေ့နှင့်နှောင်းတန်ခူးလပြည့်ကျော် (၈) ရက်၊ခရစ်နှစ်၂၀၂၀ခုနှစ်ဧပြီလ (၁၅) ရက်၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(ဤတွင်မဟာသင်္ကြန်အကြတ်နှစ်ရက်ဖြစ်သည်)မဟာသင်္ကြန်အတက်ချိန် – ၁၃၈၁ ခု၊တန်ခူးလပြည့်ကျော်(၉)ရက်၊ခရစ်နှစ်၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၁၆)ရက်၊ကြာသပတေးနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်နံနက်စက်(၃)နာရီ
ကိုယ့်အပေါ် တစ် ကျပ်ဖိုးကောင်း ရင် ၁ဝဝ ဖိုးေ လာ က်ပြန်ေ ကာင်း တ တ်ေ သာ သောကြာ သား သမီး များ အကြောင်း
သော ကွာသား သမီးမြား အကွောငျး အပွောအရမျးကောငျးပီး နှုတျခြိုတာ သောကွာ….. အဓိကမကျြလုံးရယျ နှုတျခမျးရယျဆှဲဆောငျမှု့ရှိကွတယျ…. စိတျခံစားမှု့အရမျးလှယျတတျပမေဲ့ ဟနျဆောငျကောငျးတဲ့သူတှပေါ…. အခဈြလညျးအရမျးကွီးသလို အမွကျလညျးအရမျးကွီးတတျကွတယျ….. ဒေါသကွီးပီဆို ဘာကိုမှမမွငျတတျပဲ လုပျခငျြရာတဇှတျထိုးလုပျပီးမှ နောငျတရနတေတျတာ….. လောဘကွီးတဲ့အထဲမှာ မပါဘူး …ရှိတာနဲ့ရောငျ့ရဲတတျသူတှေ…. စကားမြားရနျဖွဈရမှာကို မကွိုကျဘူး…အကွောကျဆုံးက သူမြားအပျေါ အကွှေးတငျနတော… အရာရာကိုစဉျးစားခငျြ့ခြိနျပီးမ လုပျတတျကွတယျ… လုပျရငျလညျးဘယျတော့မှ နောကျမဆုတျဇှဲရှိကွတယျ…..
ကောဇာ သက္က ရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ် အ တွက် … ( အင်္ဂလိ ပ်ခုနှစ် 2020 ) တစ်နှစ် စာ အတွက် ယ ခု လာ မယ့် သင်္ကြန် စာ ပါ။ ဖတ် ​ဖို့ အ ချိန်​ မ ရင်​ မျှ ​ဝေ ​ပေး ပါ သိမ်း ထား ​ပေးပါ
ယခု လာမယ့်သင်္ကြန်စာပါ။ဖတ်​ဖို့အချိန်​မရင်​ မျှ​ဝေ​ပေးပါ သိမ်းထားေ ပးပါ သူရိယသိဒ္ဓန္တ မဟာမြန်မာ မန္တလေး သင်္ကြန်စာ ဇေယျတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ခုနှစ်၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း (၁၀)ရက်၊ (၁၄-၄-၂၀၁၉) တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေစက် (၅)နာရီ (၂၁)မိနစ် (၄၂)စက္ကန့် အချိန်တွင် မဟာသင်္ကြန် ကျသည်။ (၁၅-၄-၂၀၁၉) တနင်္လာနေ့ မဟာသင်္ကြန် အကြတ်ရက် ဖြစ်သည်။ ၁၃၈၀-ခုနှစ်၊
တစ်ပတ် စာ (၇) ရက် သား သ မီး များ အ တွက် ဟော စာ တမ်း (12.3.2020 မှ 18.3.2020 အ ထိ)
တ နင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်းကံဇာတာအထူးကောင်းမွန်သောကာလဖြစ်၍ မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် ဘဝ၏ တိုးတတ် မှု များ ရှာဖွေခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းတွင် ကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်မဆိုင်တဲ့အခြားသောကိစ္စများ ပူးတွဲလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ခေါင်းစားသောလုပ်ငန်းကိစ္စများ၊ဉာဏအလုပ်များမှ ထူးထူးခြားခြားငွေကြေးအမြတ်အစွန်းများ ရရှိတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်များ ကြီးပွားအောင်မြင်မည့် အကြံဉာဏ်ကောင်းများရှိရင်တော့ လက်တွေ့ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် အကျိုးထူးမည်။အမျိုးမျိုးသော အခွင့်အရေးများစွာအနက်မှ မိမိဘဝမြင့်မားတိုးတတ် မည့် အခွင့်အရေး ကောင်းများ ရွေးချယ်နိုင်မည့်
သင့် လက် မပုံစံ ကြေ ပာပြ မယ့် သ င့်စိတ်ေ န စိတ် ထား နဲ့ ကိုယ် ရည် ကို ယ်သွေး
Uptodate MM | March 10, 2020
ကျွန်တော် တို့ရဲ့ လက်ပုံစံက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြောင်းကို အများကြီးပြောပြနိုင်ပါတယ်။သင့်လက်ချောင်းပုံစံတွေကို ကြည့်ပြီး မှုခင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်တွေကိုတောင် အဖြေရှာနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် လက်မမှာ လက်ဆစ်နှစ်ဆစ်သာရှိတဲ့ အတွက် ပိုမိုထူးခြားပါတယ်။ထိုလက်မကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့ကို အခြား တိရစာန်တွေနဲ့ ကွဲပြားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တောင်မှ လက်မပုံစံချင်းမတူညီကြပါဘူး။ထိုသို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကွဲပြားတဲ့ လက်မပုံစံကိုကြည့်ပြီး ထိုလူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို အကဲဖြတ်နိုင် ပါတယ်။ (၁) A
တစ်ပ တ်စာ ကံကြမ္မာ ဟော စာ တမ်း (၁၀.၃.၂၀၂၀) ကနေ (၁၆.၃.၂၀၂၀) ထိ တနင်္ဂနွေ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မိတ်ဆွေကောင်း ဆရာကောင်းတွေ ကြုံတွေရမည်။ ပညာရေးသင်တန်းကိစ္စ စာမေးပွဲကိစ္စ အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ စပ်တူအလုပ်တွေလည်း အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ စာချုပ်ရမည့်ကိစ္စတွေလည်း အဆင်ပြေလိမ့်မည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကောင်းများလည်း ကြုံတွေ့ရမည်။ ငွေကြေးကံလည်း အလွန်ကောင်းနေပါသည်။ ဘာသာရေးလုပ်ငန်း၊ ဘုရာဖူးခရီးတွေလည်း
မတ် လ (၈)ရက်ေ န့ မှ ၊ (၁၅)ရက်ေ န့ အ တွင်း ဆောင် ရန် ၊ ရှောင် ရန် ၊ သတြိ ပု ရန် ၊ ယတြာ ပု ရန် (၁) ပတ် စာ ဟော စာတမ်း
Uptodate MM | March 8, 2020
မိတ်ဆွေ များအားလုံးအတွက် မတ်လ (၈)ရက်မှ ၊ (၁၅)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာ တမ်း မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၀ မတ်လ (၈)ရက်မှ ၊ (၁၅)ရက် အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန်